Debian laghachi na Gnome | Site na Linux
diazepam | | Nkesa
Otu afọ gara aga Joey Hess chọrọ na mbupute nke na-esote Debian na-abịa na Xfce dị ka desktọọpụ ndabara. Taa…ọ bụ Joey n'onwe ya gbanwere mgbanwe ahụ. Ana m aha ihe ederede nke a na taskel.
Dabere na mbido nsonaazụ si
Fọdụ data achọtara erubeghị, mana n'oge a Ekwenyesiri m ike na 80% Gnome ahụ na-aga n'ihu na usoro a. Nke a dabere na nnweta na nnweta na sistemụ ụfọdụ.
Nweta: Gnome na Mate na-ebute oke oke. Offọdụ n'ime desktọọpụ ndị ọzọ emeela ka mmelite nnweta ha abanye na Debian, nke usoro a na-achịkwa, mana ha ka chọrọ ọrụ dị elu.
Mmekọrịta na systemd / wdg: Xfce, Mate, wdg nọgidere na-anwa ijide mgbanwe na-aga n'ihu na mpaghara a. A ga-enwe oge iji olile anya wepụ okwu ndị a n'oge kpụkọta ozugbo teknụzụ teknụzụ na-akwụsị ịgbanwee n'okpuru, yabụ na ọ bụghị ihe mgbochi zuru oke maka desktọọpụ ndị ahụ, mana ịga na steeti ugbu a, Gnome na-eduga.
Naanị otu ihe m chere nwere ike itule n'elu bụ nha, ma ọ bụrụ na ọchịchọ siri ike sitere na Debian ịhụ otu CD nwere desktọọpụ standalone. Otú ọ dị, ndị otu Debian na-ebi ndụ echela na o dabara na CD ọdịnala; na agbanyeghi na ndi otu Debian CD ekwughi okwu, ihe m kwuru dika onye otu bu ọ bụghịzị ihe na-echegbu anyị iji mee ka ọ bụrụ ihe mgbochi siri ike na desktọọpụ site na ndabara.
Ihe ndị ọzọ na-enweghị isi na-emetụta mkpebi a ntakịrị gụnyere:
- Ndị otu Gnome na Debian mere Gnome ikpe siri ike ka nwee nnukwu obodo, wdg.
- Gnome 3 dị ka ọ ka mma karịa kemgbe ịhapụ Debian ikpeazụ.
- Otu XFCE na Debian ambivalent banyere ma o kwesiri ibu desktọọpụ ndabara. Ahụghị ọtụtụ onyinye agbakwunyere n'oge ọ bụ ndabara na-anwale ọnwa 9 gara aga ma ha ka bụ otu obere.
- Ndị otu egwuregwu Debian na-eme ezigbo okwu maka Mate, mana n’aka nke ọzọ ọ bụ ihe ọhụụ nye Debian, n’enweghị nnwale ma ọ bụ ọtụtụ ndị ọrụ. Mgbe n'otu oge ọ bụ ihu ọma 2.0. Debian nlọghachi na-ewute m, n'agbanyeghị ịbụ ezigbo desktọọpụ gburugburu.
- Tasksel na-enye gị ohere ịhọrọ desktọọpụ ndị ọzọ na ndepụta ahụ, yabụ nke a bụ ndabara, nke nwere ike igbanwe nfe.
Nọ n'ụzọ, GNOME 3.14 bịara n'akụkụ alaka.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Debian laghachi na Gnome
Ahụrụ m XFCE n'anya mana ọ bụ eziokwu na n'ọnwa gara aga nsogbu nke sistemụ na-ahapụ ya ezigbo ko na Debian na m ghọtara na ọ na-alaghachi Gnome n'agbanyeghị na anaghị m amasị ya nke ukwuu
Otu ihe ahụ. Agbanyeghị, n'ọnọdụ m, XFCE na-agba oyi mgbe ọ na-agba Iceweasel na Chrome / Chromium n'otu oge.
A gbahapụrụ Xfce ọkara, nke ahụ bụ nsogbu ahụ. Otu afọ na ọkara n'azụ oge ha nyere maka mbipute ọhụrụ nke 4.12 na enweghị ebumnuche nke ịkwaga GTK3 ma. Ma ọ bụ desktọọpụ bụ isi, Xarchiver na ndị ọzọ na-abụghị akụkụ kernel ka njọ.
N'aka nke ọzọ, ọ na-ewute m ịhụ na Gnome emeriwo. N'ihi ike ọgwụgwụ, enweghị ndị iro, ihe ọ bụla, mana ọ naghị edozi ihe ndị ọrụ ya rịọrọ (ọ ka enweghị nyocha ihuenyo, ọ nweghị ike ịgbanwe ngalaba ahụ, ọ naghị eweghachi ọrụ nkewa na Nautilus, yana ihe niile ndị ọzọ, ee , o nwere Amaghị m ihe map, ihe mara ihe) na njedebe ọrụ emegharị ya. Agbalịrị m Cinnamon na Jessie ogologo oge gara aga ma ọ bụ nnukwu desktọọpụ, mana ọ ka na-adabere na ngwa Gnome ma ghara itinye aka na ọnọdụ ndị ahụ, ihe ihere. Ma eleghi anya m gha etinye ya mgbe Jessie kwusiri ike.
Agbanyeghị, M ga-nzọ na Mate, ọ nwere ike ịbụ na Gnome eme ihe ọ chọrọ na n'ikpeazụ ntaramahụhụ maka ẹsụhọde ọrụ bụ nanị nwa oge, 🙁.
Ọ bụ naanị m ma ọ bụ onye ọzọ hụrụ na ị kwuteghị KDE na arụmụka gị niile? Aghọtaghị m ihe bụ nsogbu dị na KDE na Debian eziokwu.
dịka njikọ ahụ Joey si lee anya, KDE nwere ihu ala ma a bịa na ịnweta
Biko .. gwam ihe isi ya bu n'ihi na aghotaghi m. Na agbanyeghị, ha ga-ama ...
accessibility :: Ranknye ọkwa
Ndi ìsì na ndi nwere nkwarụ ndi ozo nwere ike ihu desktọọpụ? Biko kwupụta ogo nke nnweta desktọpụ ọ bụla site na -1 ruo +1.
Kpesa site na otu nnweta:
Ihu ọma, MATE bụ desktọọpụ kacha nweta. Gnome ewetaala nnweta nnweta nnweta ma e jiri ya tụnyere nke ahụ. lxde na Xfce enweghị ike ịnweta n'ihi na ihe dị ka panel ha abụghị. cinnamon nwere ike accessibility mbipụta (mmalite menu, panel). KDE enweghị ike ịnweta.
Enwere chinchi nwere Xfce nke na - eme ka ọ ghara inweta ya ugbu a, kwesịrị idozi ya ngwa ngwa: 760740, 760777, 760778
@diazepan Nke ahụ anaghị agwa m ihe ọ bụla. Ndị otu Debian guzobere nnweta nnweta ahụ maka ebumnuche a, mana ọ ga-adị mkpa ịhụ ihe bụ ntuziaka ha na-ebu n'uche mgbe ha na-esite akara ha, n'ihi na ha nwere ike ịbụ ndị ọrụ GNOME na-enweghị mmasị na KDE, ị ghọtara isi m?
Ugbu a, m ga-achọ ịma echiche nke ndị ọzọ gbasara ihe, gịnị bụ ihe na - eme ka GNOME nwee ike ịnweta karịa KDE? n'ihi na site na m si ele ya ọ bụ ndị ọzọ.
N'ụzọ bụ isi n'ihe banyere nnweta ihe ndị a na - eme, dịka ozi sitere na Joey Hess na listi nzipu ozi:
- Gnome dị ka enwere ike ịnweta ugbu a, ọkachasị na ntọhapụ 3,14. Amaghị m ma ọ bụrụ na ọ bụ enyi na enyi maka ndị ọrụ nwere ikike ọhụụ dị ntakịrị, yana ọ bụrụ na enwere ike iji ya rụọ ọrụ na keyboard, mana opekata mpe chinchi dị oke egwu m chere. Ihe bụ nsogbu bụ: ọ bụghị customizable ezu, ọ bụ na ọ dịghị ebube? ga-ekwe omume na ogo dị mkpa, ezughị ezu nhazi ọdịnala. Ngwaọrụ ndị ọzọ a11y na-arụ ọrụ na ya, dị ka whisk. - LXDE erughị eru inweta, ebe ọ bụ na lxpanel erubeghị. Ọ na-arụ ọrụ, mana ọchọrọ hacks, na-eji nchịkọta ndị dị na mpụga dịka gnome-panel - XFCE anọghị ruo ugbu a, ọkachasị n'ihi Openbox ma ọ naghị ejikọta GTK ma ọ bụ NT toolkits. - KDE abụghị: na usoro iwu, ọ na-arụ ọrụ site na qt-at-spi, mana ruo ugbu a, enweghị ike iji ya mee ihe. - MATE, ọ bụghị na benchmarking a, bụ azịza kachasị mma. Ha kwaga GTK3… ..
Ya mere, emehie nke ahụ, m na-atụ aro gnome, onye nwere ezigbo ọrụ na a11 na site na ndị na-elekọta orca (Joanie). Agbanyeghị, ị ga-etinyerịrị MATE na benchmarking.
N'ebe a, m ga-asịrịrị na m arụbeghị ọrụ Nwachukwu, na ọtụtụ ihe gbasara KDE, yabụ na amaghị m etu esi arụ ọrụ na Desktọpụ Gburugburu ebe a maka ndị nwere obere nkụda mmụọ ma ọ bụ nkwarụ ndị ọzọ.
Agbanyeghị, ma na-ele naanị n’elu, enwere ọtụtụ ngwaọrụ maka ebumnuche a: Kmouth, Jovie, Kmag, KMouseTool, KChartHọrọ.. ya mere m na-alaghachi na mmalite m .. Gịnị kpatara na ọ bụghị KDE?
Kedu ihe ọzọ, m na-agụgharị nzọụkwụ m, anọgidere m na-agụ eri na ajụjụ ma enwere ihe na-atọ ụtọ:
XFCE anọghị na nke ugbu a, tumadi n'ihi Openbox na anaghị ejikọta na GTK
WTF? Kedu ihe XFCE nwere na OpenBox. Ma Joey Hess nwere nsogbu, ma ọ bụ na ọ nwalebeghị nke ọma desktọọpụ gburugburu o nwere dịka ihe ọzọ.
Ka m na-eji XFCE, emezigharị ihe GTK3 rụzuru na Murrina, ọ dịkwa m ka ọ bụ azịza na-adịru nwa oge maka enweghị ndakọrịta na usoro ekwuru. Tụkwasị na nke ahụ, a na-enweta ihe nnweta site na ịbubata atụmatụ GNOME 3.14 ma yabụ ị zọpụta onwe gị nsogbu nke ịnweta (ọbụlagodi Ubuntu na-eme ya na Unity).
Naanị KDE abaghị uru na popcon ya ... ọnwa ndị a niile GNOME na Xfce nọ na teknụzụ nke ejiri ya rụọ ọrụ. N'ezie, ọ dị ka ha na-enye nlekọta ya ka ọ dị mkpa. Afọ ole na ole gara aga ka eji mara KDE ochie, nke fọrọ nke nta ka ọ gbahapụ kpamkpam, taa ọ bụghị ya, ọ bụ DE ebe m na-ede ihe, ọ dịghịkwa njọ ma ọlị.
Ọ dị m ka ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ịlụ ọgụ megide kde, nke ahụ bụ ọdịnihu n'ezie ...
Qt bụ ọdịnihu, ee, mana ọbụghị na ihe m chọrọ KDE, yabụ m ga - eme nzọ okwu na lxqt
Ama niile ị chọrọ Elav:
Ọ dị ka MATE ga-anọchi GNOME 3 na onye nọchiri Debian Jessie, n'agbanyeghị na oge a ọ meriri GNOME 3.
Nke ahụ agaghị eme @ Eliotime3000 ebe ọ bụ na akwadoghị mmepe Mate, Debian ga-aga n'ihu na-eji DE nke ọma akwadoro ebe ha na-achọ nkwụsi ike nke distro na naanị otu nnukwu nwere ike inye gị ya .. Otu 16 ndị ọ dị obere. N'aka nke ọzọ, Gnome agbanweela ọtụtụ ihe na otu ya dị ukwuu.
Otu ihe ahụ. Ka anyị hụ ma m na-echegbu onwe m ịnwale GNOME 3.14 ozugbo enwere m oge iji wụnye Antergos na PC enyi gị (GNOME 3.8 dị ka fiasco).
Chineke Zọpụta Gnome.
Na jessie installer betas, xfce bụ desktọọpụ ndabara, Aghọtara m na mgbe ha rutere beta, ọ dịghị mmezigharị ọ bụla, mana mmezi ahụhụ.
Agaghị m echegbu onwe anyị karịa eziokwu na e gburu desktọọpụ nke debian, xfce anaghị eme ka m kwenye ma ọ na-enye ọtụtụ nzuzu nzuzu na ntinye ngwa ngwa na ihe ndị dị ka
Naanị m mere ntinye na beta nke jessi, ihe kachasị mma, ọ dịkwa m anya nke ukwuu na mgbe ị ga-ahọrọ ọnọdụ desktọọpụ ọ na-enye gị nhọrọ gnome, kde, xfce, na nwunye, anaghị m mara ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe ọhụụ, maka m ee, oge ikpeazụ m jiri ya ma ọ bụrụ na ịchọrọ maka nrụnye akpaka (nke m na-anaghị eme, ịbụ "ikike -R" ntinye m dị ọcha dị ka onye ọ bụla na-agba ụta) , o yiri ka ugbu a ị nwere ike ịhọrọ.
GNOME na-aga n'ihu na-eduga ọrụ nnweta na desktọọpụ n'efu. N'otu aka, ha na-edebe AT-SPI, nke bụ usoro iwu nke na-eje ozi dị ka mmiri n'etiti ngwa ndị ọrụ na ngwa nnweta. GTK + na-eji usoro a na imirikiti ngwa GNOME nwere ike ịnweta. Ọzọkwa, ndị otu nnweta GNOME nyeere ndị ọrụ ibe ha Qt / KDE aka ịkwado nnweta, nke rue mgbe ahụ ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ịdị na GNU / Linux. Qt na-eji AT-SPI iji nye nnweta na GNU / Linux. Ọ bụ ezie na Qt enwere ike ịnweta, a ka nwere ọtụtụ ngwa KDE ndị na-adịghị. N'ikpeazụ, enwere ike iji desktọọpụ GNOME n'enweghị nsogbu na-enweghị oke, na-eji naanị keyboard.
Orca, onye nyocha ihuenyo nke GNOME nọgidere, bụ ngwa ngwa nnweta kachasị ewu ewu. Na mgbakwunye, ndị otu nnweta GNOME na-arụ ọrụ ime ka PDF akwụkwọ nwee ike ịnweta, na-agbakwunye nkwado nnweta na poppler (injin PDF nke Evince na Okular ji), na iji ikike ọhụrụ ndị a na Evince.
Zaghachi Juanjo Marin
A gha ekwenye na, n'ihi na enweghị GNOME (na nke ka njọ, na-enweghị GTK +), enweghi ike ịnweta. Nke ahụ ga-ewute anyị niile ndị gbahapụrụ ya ozugbo mbipute 3 pụtara.
KDE nwere ike ịbụ ihe magburu onwe ya, mana ị hụrụ, ndị maara ya enweghị ike ịnweta ya, amaghị m, mana ihe m nwere ike ikwu dị ka onye ọrụ njedebe bụ na nhọrọ ahụ (GNOME's) enweghị mmasị m ... , weta gburugburu nke onye ọ bụla wetara nwere ike ịhọrọ ma wụnye nke ha chọrọ.
Ọ bụrụ n ’wepu“ Alternate Desktop Enviroments ”na Debian, aga m ahapụ ya ebe ahụ.
Site na ndabara, ha ga-etinye ihe ọ bụla ha chọrọ, ma na distro dị ka Debian maka ndị na-abụghị ndị mbido, onye ọ bụla na-etinye ihe ha chọrọ. Ihe mbụ m mere na Debian Testing bụ iwepụ Xfce ma tinye KDE, nke na-aga n'ụzọ zuru oke na sistemụ, ọ mara mma, dị ike ma dị anya site na akụkọ ifo, ọ na-erepịa obere ebule na nhazi karịa Gnome ma ọ bụ Cinnamon.
ekwuru m, gini di iche o na-eme? debian na-eme otu iso maka nke ọ bụla n'ime desktọọpụ ọ na-akwado ma na ndị ọrụ na-emecha debe iso ahụ na desktọọpụ nke nhọrọ ha.
na n'ezie obodo bụ usu oke, na-eme ugwu site a ọka nke ájá. mgbe ahụ ọtụtụ n'ime ndị na-eji debian arụ ọrụ ntọala ma wuo ebe ahụ.
Ma echiche m, anaghị m amasị na gnome3 bụ kpomkwem a họọrọ. M na-eji xfce ma ahụrụ m ya n'anya mana ekwere m na ọ bụ ezigbo comatose n'ihi enweghị ndị ọrụ. M gaara ahọrọ nwunye, n'ezie.
Ka anyị hụ ma ọ bụrụ maka debian 9, anyị nwere lxde-qt, nke bụ desktọọpụ nwere ọtụtụ ikike na ọdịnihu.
Ọfọn, site n'echiche m, amaghị m ihe kpatara ha ji ahọrọ gnome, anya dị ezigbo DE, mana ugbu a ọ na-emelite ya n'ihi ya, amaghị m mana n'ezie maka ịhapụ ụlọ anụ ọ zuru oke maka ya enweghị m ike ịchọta ọ na-atọ ụtọ, ime ihe n'eziokwu kama m na-ahụ ka ha anaghị akwụsi ike ịbanye na ụlọ ọrụ siri ike ọ ga-aka mma ma ọ bụ n'akụkụ.
Xfce nwere ọtụtụ ike ma n'otu oge ahụ ọ nwere nnukwu ebe dị ala, ọ bụ na emeliteghị ya oge ọ bụla ọ kwesiri ịme mkpebi, nke ọbá akwụkwọ ọ bụla iji bụrụ desktọpụ ọgbara ọhụrụ LXDE mere mkpebi ya ma ọ dị n'ezie ụzọ na-aga n'ihu mere nke ọma. Na XFCE na-ewe oge dị ukwuu ma ha kwesịrị ilekwasị anya na ya, abụ m ezigbo onye ọrụ XFCE, mana isiokwu nke ụlọ akwụkwọ ahụ emeela ka m chee, ọ bụrụ na m na-ahụ dị ka Enlightenment ọzọ dị ka ezigbo nhọrọ naanị iji nwalee Enwere m ike ugbu a enwere m obi ụtọ na XFCE.
Ekwenyere m na nke ahụ. KDE bụ ezigbo desktọọpụ, mana ahụrụ m ya ntakịrị (ọ bụ ezie na achọpụtara m na ọ dị ọkụ karịa Windows Aero na Aqua si OSX). Agbanyeghị, enwere m otu ma ọ bụ nsogbu ọzọ mgbe m na-eji GIMP yana mgbe ị na-agbanwe isiokwu mere ka m kwụsị ịga n’ihu iji ya na Debian.
Aghọtaghị m ihe kpatara na ha anaghị atụle kde
ọ dịwo anya ọ nọ na desktọọpụ nke oge a kachasị kwụsie ike
Gnome enweghịkwa uru dị na iso
Ọ dị ka mkpebi dị oke mma nye m .. Buru n'uche na Gnome site na mbipute 3.8 gaa n'ihu maara ihe ọzọ .. Ọ bụ ezigbo gburugburu ebe obibi ma ọ bụ gburugburu ebe kachasị arụ ọrụ na Linux. Buru n'uche na XFCE "kwụsịrị" n'oge gara aga, ịkwaga GTK3 adịghị ezu ma mbipute 4.12 maara mgbe ọ bịara ... Ma maka ndị na-enweghị mmasị na Gnome, ha nwere ike ịhọrọ mgbe niile ịwụnye gburugburu ebe obibi.
Enwere m obi ụtọ na XFCE, ọ bụ ezie na ihe na-adịghị mma bụ na ọ naghị abịa na mkpirisi ụzọ mkpirisi igodo ugboro ugboro (dị ka nseta ihuenyo ahụ, isi Super iji mepee ngwa ngwa Windows).
ya mere mgbe ọtụtụ afọ gasịrị ... KDE na-enweta mmeri maka mmekọrịta ya. Hapu ihe nile ka hapu.
Na otu esi adị mfe iji wụnye Crunchbang… .ay.
Debian Stable + Openbox, gịnị nwere ike ịgahie?
Hichapụ conky site na ntuziaka ndị ọrụ ma ghara inwe ntakịrị echiche otu esi eji ụzọ mkpirisi Openbox? : v
Ihe ọ bụla ha na-ekwu, ọ ga-amasị m ka ya nwee Mate dị ka desktọọpụ ndabara, lol, ọ dị mma nke ukwuu ma ọ ka bụ desktọọpụ ụwa
Debian ga-atọ ụtọ na gnome 3.12 agbanyeghị, ebe ọ bụ na 3.4 adabaghị nke ọma ihe gnome chọrọ iji chee anyị, ewezuga ụdị nke 3.4 ahụ nwere nsogbu na ngwugwu tracker-miner-fs nke na-akọwa ihe kpatara na ọ naghị eri ihe niile cpu na akụkụ nke ebulu ahụ site na 3.6 gaa n'ihu na-edozi ya, n'aka nke ọzọ, anọ m na-eji gnome niile 3 ruo 3.12 na obere 3.14 Enwere m ike ịsị na site na 3.8 gaa n'ihu ọ na-akpa ezigbo oke, nnweta Ka isiokwu ahụ dị tụlere, ọ dị mma na ngwa ngwa iji nwee ike, yabụ ọ bụ mkpebi dị mma na debian alaghachila na gnome, maka ndị na-akatọ na-enweghị ịnwale ụdị dị iche iche nke gnome 3, ihe ihere ọ bụ maka ndị ahụ Ha bi n'oge gara aga. , n'ihi na dị ka m na-emesi ike na ụdị ọhụụ ọ bụla ha na-emeziwanye nkọwa niile.
Otu ihe ahụ. GNOME 3.8 dị ezigbo mmiri ma eziokwu ahụ bụ na, n'adịghị ka ihe ha chọrọ igosi na GNOME 3.4, ugbu a ị nwere ike ịsị GNOME 3 nke ọma.
Banyere GNOME Shell Classic, ntọala a ọ ga-abụ naanị RHEL / CentOS? Maka na enweelarị m ike iji GNOME 2.
Nhazi ahụ abụghị naanị ma ọ bụrụ na ọ bụghị ọtụtụ disros etinyela shea kpochapụwo ma ọ bụ nwee mmasị ime nke ahụ, ikpe ahụ bụ naanị iji nyere ụfọdụ plugins shei aka, nke mere na ọ na-enye gị otu nsonaazụ na nke a enwere plugins 5 ka gnome shell na-ewe usoro nke gnome classic session, ha bụ ndị a: gnome-shell-extension-alternate-tab, gnome-shell-extension-apps-menu, gnome-shell-extension-launching-new-atụ, gnome-shell-extension -places-menu, gnome -shell-extension-window-list, ọ ga-abụ ndị ahụ na ọ nweghị ihe ọzọ ga-ahapụ iji hazie ndọtị ọ bụla iji dabaa onye ọ bụla.
Enweghị m mmasị na gnome, mana ọ bụrụhaala na a ga-eji MATE na Debian, Achọghị m ịma ihe ndabara Debian desktọọpụ bụ. N'oge a m na-eji Point Linux dabere na debian 7 stable, na MATE 1.4.2 ederede na ọ na-aga ngwa ngwa, ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma. 🙂
Kedu ihe mmechuihu, echere m na ha ga-agbanwe gburugburu desktọọpụ ha mana ha ka na-emechi na-aga n'ihu iji GNOME site na ndabara na-enweghị ịnwale ndị ọzọ dịka KDE, XFCE ma ọ bụ ọ bụrụ na ọ bụ maka nsogbu akụ dị ka LXDE ebe ọ bụ nkesa bụ a na-ejikarị ya na sava weebụ.
9 mgbaàmà ị kwesịrị ịkwaga na Linux